होली खेल्दै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुस यी कुराहरुमा ! | Nepali Radio Network radionrn.com होली खेल्दै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुस यी कुराहरुमा ! | Nepali Radio Network
होली खेल्दै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुस यी कुराहरुमा !
१७ फाल्गुन २०७४, बिहीबार ०८:०५
दिनेश न्यौपाने ,काठमाण्डौ । होली रंग खेल्दै सबैसंग आत्मियताको सम्बन्ध गास्ने पर्वका रुपमा पनि लिइन्छ। होलीमा जसरी मानिसहरुको बाहिरी आवरण रंगले रंगिएको हुन्छ । त्यसरीनै मनमा पनि हर्षउल्लास, उमंग र आत्मियताले रंगिएको हुन्छ ।
रसायनयुक्त रंगले ज्ञानिन्द्रीय असर
पछिल्लो समयमा हामीले होलीमा कसरी रंगहरुसंग रमाउने भन्ने कुराको ख्यालै नगरी जथाभाविरुपमा खेलिने रंगहरुले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो असर पुर्याइरहेको छ भन्ने हेक्का समेत राख्दैनौ । यसरी जथाभावी रुपमा खेलिने रंगहरुले मानिसका ज्ञानिन्द्रीयहरुमा नराम्रो असर पार्न सक्छ ।
रंगहरुसंगै रमाउने, रङ्गीन पानिमा छुलुमुलु गर्दै, होलीका गित गाउँदै, रमाइलो गर्दै आपसी रिसईबीलाई बिर्सेर उत्साह र उमङ्गका साथ मनाइने रङ्गीन पर्वको रूपमा होलीलाई लिइन्छ । होली रङ्गहरूको चाड हो । होली पर्व मनाउनुको पौराणिक कारण र इतिहास छ । होली खेल्ने दिन भन्दा एक दिन पहिला राती होलीका दहन गरिन्छ ।
राती होलीका दहन गरिसके पछि बिहान पानीमा रङ्ग घोलेर एक अर्कामाथि फाल्ने चलन छ । तर पछिल्लो समयमा बजारमा पाइने केमिकल युक्त रंगले होली खेलिनु र जथाभावि छ्याप्ने प्रबृतीले हाम्रो स्वास्थ्यमा ठुलो नकरात्मक असर पार्ने प्राध्यापक डा.ढुंडिराज पौडेल बताउछन् ।
होली खेलौ, आत्मियता बाँडौ
होलीको दिन स–साना नानीहरूदेखि वृद्ध वृद्धा सम्म सबै होलीमा एक अर्कालाई रंगसंग खेल्दै आत्मियता बाड्ने गर्छन् । फागुपूर्णिमा अनी होली भनिने यो पर्वलाई धुमधामका साथ, अरु ठुला पर्व जस्तै रमाइलो गरी मनाइन्छ ।
विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु र त्यसमाथि रङहरुको बर्षाले सहरको होली अझै रमाइलो र राम्रो देखिन्छ । नेपालका गाँउहरुमा पनि होली भब्यताका साथ मनाइन्छ । पछिल्लो समय होलीको नाममा विभिन्न विक्रिती विसंगति पनि निम्त्याइएको सस्कृतीबिद् बिणा पौडेलको बुझाई छ ।
जवर जस्ती रंग दल्दा प्रहरीले पक्रेला नी ?
रंगदल्ने बहानामा बिभिन्न फोहोर चिजहरुको प्रयोग, मान्छेको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा नबुझी जवरजस्ती रंग छ्याप्ने, लोला हान्ने गर्नाले यस्तो दिन प्राय मानिसहरु बाहिर निस्कन डराउछन् । महिलाहरु आफुलाई असुरक्षित महसुस गर्छन । होलीमा इच्छा विपरीत लोला हाने वा रंग लगाउनेलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिने र कडा कारबाही गरिने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले बताए ।
होलीलाई पुरानो कटुता समाप्त गरेर र दुस्मनी बिर्सेर एकआपसमा खुशी साट्ने दिनका रुपमा मनाइने भएकाले यस पर्वलाई सुरक्षित र मर्यादित तरिकाले मनाउन सकिने हो भने हाम्रा सस्कृतीलाई बचाइराख्न मद्धत पुग्नेछ ।
थपलिया र ओझा बारेमा आज संसदीय सुनुवाई
भेरी बबई डाइभर्सनआयोजनाको सुरूङमार्गको आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ब्रेक थ्रु गर्दै
प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षकै पहिलो दिन नन्दी भृंगी भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेस आक्रोशित
आजदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु , ९१ हजार बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर